onlineakhabar.com: OMG !! यी युवतिलेले गरिन् आफ्नै आत्महत्याको प्रत्यक्ष प्रसारण (भिडियो सहित)
Amazing Girl, Amazing News, Amazing Video, Amazing Woman, International, Main News, Video, Viral Video » OMG !! यी युवतिलेले गरिन् आफ्नै आत्महत्याको प्रत्यक्ष प्रसारण (भिडियो सहित)
OMG !! यी युवतिलेले गरिन् आफ्नै आत्महत्याको प्रत्यक्ष प्रसारण (भिडियो सहित)
फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा एक १९ बर्षीय युवतिले ट्रेनको अगाडी हामफाल्दै आत्महत्या गरेकी छन् । यस्तो आत्महत्याको समाचार खासै नौलो होइन तर यहाँ ति युवतिले आफ्नो यो हरकतलाई आफैले प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरेकी छन् । खबरका अनुसार ति युवतिले यसको प्रसारण पेरिस्कोपमा गरेकी थिइन् ।
यी युवतीले आत्महत्याको लाईभ प्रसारणमा आफ्नो साथमा बलात्कार भएको कुरा जनाएकी छन् । साथै हमलाकारीहरुको को नाम पनि बताएकी छन् । यि युवतिले बताएकी आरोपीहरुको जाँच निकै गम्भिरतापूर्वक भैरहेको जनाइएको छ ।
दक्षिणी पेरिसको एग्ली नाम गरेको स्थानमा यो घटना घटेको थियो । यसबारेमा पुलिसले जाँच गरिरहेको जस अन्तर्गत उक्त युवतिको मोबाइलका डाटाहरुबारे अनुसन्धान भैइरहेको छ । पुलिसलाई यो घटनाबारे जानकारी पेरिस्कोपमा भिडियो देखिएपछिमात्र थाहा भएको थियो ।
केहो यो पेरिस्कोप भनेको ?
पेरिस्कोप एउटा स्मार्टफोन एप हो, जसले युजरहरुलाई माइक्रो-ब्लगिङ वेभसाइट ट्विटरको आफ्नो एकाउण्टको माध्यमबाट कुनैपनि भिडियोलाई लाईभ प्रसारण गर्ने सुविधा दिने गर्दछ । प्रत्येक भिडियो २४ घण्टा सम्म साइटमा उपलब्ध रहन्छ ।
Tags : Amazing Girl Amazing News Amazing Video Amazing Woman International Main News Video Viral Video